Ogaden News Agency (ONA) – AlJazeera – Wadiniyadii Oromada oo sii Kordhaysa : By William Davidson.
AlJazeera – Wadiniyadii Oromada oo sii Kordhaysa : By William Davidson.
Maqaal cinwaan looga dhigay – Oromo nationalism on the rise in Ethiopia – Itobiya Wadinayadii Oromada ayaa sii Kordhaysa – ayaa qoraaga maqaalka William Davison kaga xogwaramayaa xaaladda dadka Oromada ah ee ku hoos jira gumaysiga Itobiya. Wuxuu ku bilaabay maqaalka xog ku saabsan wiil ka mid ahaa ardayda banaanbaxa lagaga soo horjeedo xukuumadda oo ku dhintay xabsiga Itobiya. Wuxuu yidhi; Aslan Xassan oo ka mid ah qawmiyadda Oromada ee Itobiya, ayaa waxaa la dhihi wuxuu ahaa dambiile is-dilay ama wuxuu ahaa arday aan waxba galabsan oo ku dhintay gacanta adag ee xukuumada. Waxayna ku xidhantahay dhanka aad warka ka hesho.
Dhimashada ardaygan ayaa ka dambeysay banaabaxyadii ardayda Oromada ay kaga soo horjeedeen qorshaha balaadhinta Adisababa ee ka dhacay dhowr magaalo oo Itobiya ah. Sirdoonka Itobiya ayaa iyagu ku andacoonaya inuu Xassan is-daldalay ka dib markii lagu soo qabtay bambaano uu ku tuuray Jamacadda Haramayo. Hasa ahaatee shabakadaha Internetka Oromada dadka qora sida Jawar Maxamad waxay leeyihiin Aslan oo 24jir ahaa waxaa qawracay booliska 1dii June isagoo ku jira xabsiga afar maalin ka dib markay soo qabteen. Nin soo arkay maydkiisa wuxuu qiray in wiilka la qalay indhahana laga saaray.
Wuxuu yidhi qoraaga; Xukuumadda Itobiya ayaa inbadan lagu eedeeyaa inay ku tomato xuquuqda qawmiyada sida dastuurkooda uu qorayo, iyagoo ahmiyadda siiya nabadsugidda iyo xasiloonida siyasadeed iyo waxay ugu yeedhaan horumarinta. Nin Oromo ah oo is-qarinaya oo Jaamacadda Adisababa wax ka dhiga ayaa igu yidhi; “Waxay u arkaan inuu fiican yahay horay ugu talaabsan iyagoon cidna ka tixgalinin. Waa arin dhamaatay oon cidna lagala tashanaynin.”
Kooxaha Oromada oy ku jiraan kuwa ka tirsan xukuumadda ayaa u arka in qorshaha balaadhinta Adisababa ee loo yaqaano (“integrated master plan” ) loola jeedo in dhulka lagaga qaato Oromada, si loo daceefiyo qawmiyadooda oo beeralayda Oromada ah ee hareera caasimada dagan looga raro. Oromada ayaa rumaysan inay tahay Adisababa caasimadooda iyagoo aad uga dhiidhiyay 2004 markii la damcay in caasimad looga dhigo Adama.
Banaabaxyadii ugu xooga badnaa waxay ka dheceen magaalada Ambo kolkaasoo banaabaxii uu isu badal gadood ardayda oo dab qabadsiiyay gawaadhi badan oo guryana burburiyay. Booliska ayaa rasaas ooda kaga qaaday oo halkaa ku dilay shacab badan. Jaamacadda Haramaayo ayaa lagu tuuray bambaano arday TV-a ka daawanaysay kubadda cagta. Saraakiisha ayaa ku eedeeyay goonigoosadka Oromada inay ka dambeeyeen, hasa ahaatee dadka u dhaq-dhaqaaqa Oromada ayaa farta ku fiiqaya inay sirdoonka Itobiya ka dambeeyeen arintaa. Waxaa aad u yar buu yidhi qoraaga inaad hesho warar dhex-dhexaad ah maadaama ay dawladda xayirtay saxaafad madax-banaan inay wax ka qoraan.
Intay banaanbaxyada socdeen ayaa waxaa soo baxay shabakadu wax ka qora oo ka madax banaan, waxaana ka mid ah Jawara oo ah arday Jaamacdda Colombiya wax ka dhigta. Banaanbaxyadaa iyo sgabakadaha Oromada ayaa aad u kiciyay dareenka dadka Oromada ah iyo qurbajoogta oo noqday xoog ku soo biiray oo iskaashigooda uu khal-khal galiyay xukuumadda Itobiya.
“Banaabaxyadii ardayda ee dhaweyd iyo dhaq-dhaqaaqa shabakadaha ka socda waa muhiin sababtoo ah waxay muujinayaan inuu jiro facaad cusub oo wadiniyiinta Oromo ah taasoo ka dhigan inuu warayo dareenka Wadiniyadda Oromada.” Ayuu yidhi Michael Woldemariam, oo ah Kaaliye Broofesoor Xidhiidhka Dawliga ee Jaamacadda Boston.
Wuxuu qoraaga ka waramayaa sida dadka Oromada ah ay u midab-takooraan labada qawmiyadood ee xukunka dalkaa haysta ee kala ah Tigree iyo Amxaaro, kuwaasoo u arka Oromada inay yihiin dad aan ilbax ahayn, sida uu qoray Taariikyahan John Markakis. Waxaa Oromada laga ilaaliyay inay wax ku yeeshaan awooda xukunka qaranka, intii ka horeysay 1991 oo jabhadda OLF iyo jabhadihii kalee hubaysnaa ay ka qabadeen xukunka dawladii Dargiga. Hasa ahaatee OLF ayaa ka baxay dawladii ku-meelgaadhka ahayd ka dib markay isku dhaceen jabhadii ugu taagta roonayd ee Wayaanaha TPLF. Labaatankii sanee lasoo dhaafay ururka OPDO ayaa matalayay Orormada oo ka mid ahaa xisbiga talada haysta ee EPRDF, hasa ahaatee mucaaradka Oromada ayaa rumaysan in OPDO yahay mid ay u shaqaystaan Wayaanaha oo aad u liita oon waxba tari karin dadka Oromada ah.
Jawara oo sida uu sheegay qoraaga maqaalka ay sumcadiisa kor u kacday ka dib markuu barnaamij ka socday Aljazeera ka sheegay inuu yahay marka ugu horeysa yahay nin Oroma ah oo aanu ahayn Itobiyaan ayaa yidhi; jiil cusub oo Oromo ah oo aqoon leh ayaa soo baxay oo dib u habayn ku sameeyay kooxaysiga ka dhex jiray Oromada. Waxay sameeyeen Oromo Media Network, waxayna ku qabteen Mareykanka shir lagu magacaabay – Oromo First –, waxayna ka shaqeeyeen inay isu keenaan xubno ka kala socda OPDO iyo OLF si wada shaqayn u dhex marto oo qorshe loo dajiyo sidii looga wada shaqayn lahaa doorashooyinka soo socda in la yareeyo awooda xisbiga EPRDF, inkastoo buu yidhi qoraaga maqaalka ay adagtahay arintaasi marka la fiiriyo xadhiga iyo cadaadiska xoogan ee socda. Wuxuu intaa raaciyay Jawara; Dhaq-dhaqaaqa Oromada waxaa horyaala laba arimood oo kala ah inay ku qanciyaan Amxaarada inay dhamaatay oo aanay soo noqonaynin maalmihii tagay ee halka luqad iyo halka qawmiyad ee xukunka haysata iyo in la’isugu tago sidii looga hortagi lahaa kooxda Tigreega ah ee qabsatay awoodii dawladda, sirdoonka iyo dhaqaalaha.
Jawara oo u ololeeyaa iska caabin nabdaysan (peaceful civil resistance), ayaa sheegay inay arintaasi sii socon doonin gaar ahaan marka ay booliska dadka six un ula dhaqmaan.
Maqaalkan oo ah mid xiisa leh: Halkan Ka Akhri.
Way cool! Some extremely vald points! I appreciate you penning this